Ny fampiasana static dia tsy dia malaza loatra amin'ny fanofanana an-trano. Amin'ny ankapobeny, vonona ny hanao fihetsiketsehana miverimberina ny olona, ​​ary mino fa mahasoa kokoa izany. Raha ny marina, ny fomba fiasa ara-pitsipi-pifehezana dia manampahaizana mahomby amin'ny fahaverezan'ny lanjany sy ny fahazoana hozatra tsara, ary ilaina ny mampihatra azy ireo tsy tapaka.
Static exercises: tombony
Ny adin-tsaina miorina amin'ny toe-batana dia tsy voajanahary firy noho ny olona iray noho ny dynamique iray. Ohatra, ny fampiasana static ho an'ny hazondamosina dia zavatra mahazatra indrindra ho an'ny vatana, satria ny vozona eo amin'ny totozy dia miantso hatrany mba hanohana azy amin'ny tonony.
Ny tombontsoa amin'ny fampiharana toy izany dia mety tsy mitovy. Ny tebiteby matevina amin'ny antsasaky ny tanjaka dia manome enta-mavesatra be amin'ny vatan'ny menamena mena, izay mampiavaka ny angovo avy amin'ny tavy. Ireo fampiharana ireo dia tsara indrindra ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana sy ny fandoroana fofona , indrindra raha voataona taorian'ny dynamique ...
Ny fanazaran-tena ara-batana amin'ny ankapobeny dia mitarika fibra amin'ny fotsy hoditra, izay mahatonga ny fihenan'ny volavola sy ny fampitomboana ny tanjaka. Noho izany dia maro ny toeram-pianarana gymnastika isometrika no natsangana, izay tsy misy fiantraikany ratsy noho ny fanatanjahan-tena.
Noho ny adin-tsaina mavesa-danja eo amin'ny fo sy ny fantson-dra, dia tsy asiana fampiharana toy izany ho an'ny olona mijaly noho ny aretina avy amin'ity sehatra ity.
Static fampiharana ny fahaverezan'ny fahavoazana sy ny gazety
Eritrereto andiam-pampianarana malaza sy mahomby izay mamela anao mora foana sy mitondra haingana ny vatanao mba hamolavola, hanevatevona ny fonao ary hiantehitra ny hozanao. Ataovy tsara indrindra izy ireo miaraka amin'ny dinihina dinamika (ao amin'ny tapany faharoa amin'ny fivoriana) mba hanamafisana ny fahaizan'izy ireo.
Static push-ups. Raiso ny lafin-toetranao mandainga, aza manosika tanteraka ny fanosehana, fa mandra-piavonavona, mijanòna ao amin'io toerana io ary tanteraho hatramin'ny ela araka izay azo atao.
Ho an'ny hozatry ny leo. Mitsangàna mahitsy, manindrona ny tanana eo amin'ny tranokely eo amin'ny lamin'ny kibony, palma mitaingina ambony. Ataovy ny ezaka, toy ny hoe te hanapaka ny fikatonan'ny kibonao ianao amin'ny lafiny samihafa. Mifantoha amin'ny asan'ny soritra.
For muscle pectoral. Rehefa mitsangana ianao, atsangano ny sandrinao eo amin'ny tratra ary atsangano ny palmie eo am-pelatananao. Mifampitondrà ny tananao amin'ny antsasany am-pitiavana, ary farafaharatsiny.
For triceps. Mitsangàna eo am-pandohalehana eo anoloan'ny trano fiambenana, ary asio eo an-kandrinao ny tananao. Atsangano ny kitapo miaraka amin'ny herinao rehetra.
For biceps. Mijoro amin'ny tananao eo amin'ny lohanao, mamelatra ny elany eo amin'ny andaniny. Ny palmie dia tokony hikapoka ny lohany.
Ho an'ny gazety. Mialà eo amin'ny lamosinao, zarao ny tongotrao malalaka ary mitsangatsangana eny amin'ny tany. Atolory eo amin'ny tany ny sorokao, atsangano ny sandrinao. Eritrereto ny fihenan'ny tsimokaretina.
Ho an'ny hozatry ny hozatra. Mitsangàna mahitsy ary asandrato ny tananao eo amin'ny elany. Afaho amin'ny fomba iray ny fomba iray, avy eo ny andaniny faharoa, ary ataovy izay hahazoana antoka fa mbola tsy mihetsika ny valiny.
Ho an'ny hozatry ny lamosina. Mitsangàna amin'ny tongotrao na tady na tady, mitazàna ny fara-tampon'ny tananao, ary miondrika amin'ny tendron-tsoroka any aoriana ianao.
Ho an'ny hozatry ny lamosina. Mialà eo amin'ny tany eo amin'ny kibonao, mametraha ny tananao ao ambadiky ny lohanao ary mipetraha tsara any aoriana.
Ho an'ny tongotra. Mijoroa amin'ny rindrina eo amin'ny rindrina, manalaho ny tongotra iray amin'ny lava tongotra. Ny tongotra manaraka, miady amin'ny rindrina. Aorian'izany, miomàna ny tongotrao. Mifantoha amin'ny fahatsapana eo amin'ny vala.
Tsara ny manamarika fa alohan'ny fampiasana static mila mila fanairana tsotra izao ianao : mampifanaraka ny fifandraisan -tanana , manantona ny hozatra, manao jogasy kely mba hampafana, mba ho vonona daholo ny hozatra rehetra ary tsy marary aorian'ny fampiofanana. Any amin'ny faran'ny toeram-piofanana maniry.
Sakafo ho an'ny fahavoazana ara-boajanahary - ireo zavamanitra mahomby amin'ny fandoroana tavy
Kilaoty ambany kalorie
Harona maivana ho an'ny fahavoazana
Herring dia tsara sy ratsy
Nahoana ny puppy no mihomehy?
Asidra Salicylic amin'ny tarehy
Ny valindry no tsara kokoa - mitsangatsangana na avy amin'ny gorodona?
Ahoana ny fomba hampianarana alika ny ekipa "manaraka"?
Inona no atao hoe firewall - inona no asan'ny firewall sy firewall?
Ny fitsaboana ny osteochondrosis amin'ny valan'ny fitsaboana
Ny saka be indrindra amin'ny saka
Kitapo vita amin'ny bao
Ny Britney Spears dia nanadino fa mahazatra an'i Taylor Swift
Efitrano ambony amin'ny haingaka
Famantarana ho an'ny Krismasy
Fanomezana ho an'ny lehilahy iray 55 taona